Sb2o3 99 China Manufacturers & Suppliers & Factory
Sb2o3 99 - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Sb2o3 99 ထုတ်ကုန်များ)
ခနောက်စိမ်း (III ကို) အောက်ဆိုဒ် / Sb2O3 99.8% / Sb2O3 99.9%
ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ဖြေရှင်းချက်များနှင့်အက်ဆစ်ထဲမှာပျော်ဝင်ရေထဲမှာပျော်အဖြူရောင်အမှုန့်, ။ တစ်ဦးခြယ်ပစ္စည်းများနှင့်မီးလျှံနှောင့်နှေးအဖြစ်, အဖြူရောင်ဆိုးဆေး, သုတ်ဆေးနှင့်ပလတ်စတစ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90%...
Sb2O3 99,5% 99.8% 99.9% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခနောက်စိမ်း trioxide
ခနောက်စိမ်း trioxide ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ပလတ်စတစ်, cable ကိုပစ္စည်းများ, သတ္တုတူးဖော်ရေးပိုက်, ပလပ်စတစ် coated အထည်နှင့်အတုသားရေကဲ့သို့ဖြူခြယ်ပစ္စည်း, အဖြူရောင်ဖန်, ကြွေ, ဆေးပညာ, ဘိလပ်မြေ, Filler, mordant နှင့် fireproof အပေါ်ယံပိုင်း, အဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90%...
ခနောက်စိမ်း trioxide Sb2O3 CAS 1309-64-4
အဖြူရောင်ခြယ်ပစ္စည်း, အဖြူရောင်ဖန်, ကြွေ, ဆေးပညာ, ဘိလပ်မြေ, Filler, mordant နှင့် fireproof အပေါ်ယံပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြု တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90% Sb2O3...
Flame ဟာနှောင့်နှေးများအတွက်ခနောက်စိမ်း (III ကို) အောက်ဆိုဒ် 99.8% Sb2O3
ခနောက်စိမ်း trioxide Sb2O3 လျှံနှောင့်နှေး
Sb2O3 လျှောက်လွှာ ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အပေါ်ယံပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အဖြူခြယ်ပစ္စည်းများနှင့်မီးလျှံနှောင့်နှေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90% Sb2O3...
ဓာတုအတွက် Antimony trioxide ၏ matrix Catalyst sb2o3
Sb2O3 အားသာချက်များ: တိကျတဲ့နှင့်လက်ရာမြောက်သောထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90% Sb2O3
Diantimony trioxide / CAS 1309-64-4 / Sb2O3 / စက်မှုတန်း
Sb2O3 လျှောက်လွှာ မီးလျှံနှောင့်နှေး cable ကို, သတ္တုတူးဖော်ရေးပိုက်, ပလပ်စတစ် coated ထည်, အတုသားရေနှင့်များစွာသောပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တိကျတဲ့: SYMBOL...
အနိမ့်ခဲ Sb2O3 Antimony trioxide
ခနောက်စိမ်း trioxide (ဓာတုပုံသေနည်း: Sb2O3) တစ်ဦးအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားဆိုးဆေးများနှင့်မီးလျှံနှောင့်နှေးအဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသောအဖြူရောင်ဆိုးဆေး, သုတ်ဆေးနှင့်ပလတ်စတစ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90%...
အနိမ့်ခဲ 99,5% -99,8% Sb2O3 Antimony trioxide
Sb2O3 အားသာချက်များ: ရှင်းလင်းပြိုကွဲ၏ 1.The အပူချိန်လက်ရာမြောက်သောတန်းကို အသုံးပြု. အဘို့အနိမ့်ဖြစ်ပါတယ် ofSb2O3 2.High သန့်ရှင်းစင်ကြယ် တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90% Sb2O3...
ခနောက်စိမ်း trioxide ခနောက်စိမ်း oxide 99.8 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အရည်အသွေး
Sb2O3 အားသာချက်များ: အဆိုပါထှကျနေစဉ်အလယ်တန်းပူဖောင်းကိုရောက်စေဖို့တားဆီး။ တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90% Sb2O3
CAS: 1309-64-4 / Antimony oxide 99%
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99.9% nanoparticles ATO အမှုန့် Antimony
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Antimony trioxide ဖော်မြူလာ: Sb2O3 CAS အဘယ်သူမျှမ .: 1309-64-4 မဂ္ဂါဝပ်: 291,50 အဆိုပါထုတ်ကုန်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မြင့်မားအဖြူရောင်, ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူး, အသေးစားပျှမ်းမျှအမှုန်အရွယ်အစား, အနိမ့်ညစ်ညူးအကြောင်းအရာ,...
ခနောက်စိမ်း (III ကို) အောက်ဆိုဒ် Powder (Sb2O3) CAS 1309-64-4
ခနောက်စိမ်း trioxide, သူတို့ရဲ့အပူပြိုကွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မီးလျှံနှောင့်နှေးများ၏ညှိနှိုင်းအေးဂျင့်နှင့်ဟေလိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများ, မီးလျှံနှောင့်နှေးနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍများနှင့်အချို့သောဟေလိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအစားထိုးနိုင်သည်,...
Flame ဟာနှောင့်နှေး Antimony oxide Sb2o3 Nanopowder
ခနောက်စိမ်း trioxide မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဓါတ်ကူပစ္စည်း, mordant, opacifier နှင့်တိုက်ဖျက်ရေးအလင်းအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ကခြယ်ပစ္စည်းနှင့်ခနောက်စိမ်းပိုတက်စီယမ် tartrate ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်; ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းနှင့်ကုန်ကြမ်း materials.It...
CAS: 1309-64-4 / Antimony oxide 99% Sb2O3
ခနောက်စိမ်း trioxide အဖြစ်နှင့်ကြွေ၏ opacity ကိုနှင့်တောက်ပြောင်တိုးမြှင့်ဖို့ကြွေစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထို့အပြင်နှင့်အကာအကွယ်အေးဂျင့်နှင့်ကြွေနှင့် ceramics.it တစ်ဖန်ခွက်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် arsenite ၏အရပျ၌တစ်ဦး decolorizer အဖြစ်ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90%...
Diantimony trioxide / CAS NO1309-64-4 / Sb2O3 / စက်မှုတန်း
ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ပေါ်ကိုခါးပတ်နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးအဖြစ်ပလတ်စတစ်, ရော်ဘာ, အထည်အလိပ်, ဓာတုဖိုင်ဘာ, ဆိုးဆေး, သုတ်ဆေး, အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနေတဲ့ Filler နှင့်မီးလျှံနှောင့်နှေးအဖြစ်ခနောက်စိမ်း trioxide ။ တိကျတဲ့: SYMBOL Sb2O3 99.90%...
မီးလျှံနှောင့်နှေးစျေးကွက်အမှုန့် 99,5% sb2o3 စျေးနှုန်း
လျှောက်လွှာ: ပလပ်စတစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအမြှေးပါးမှာမီးနှောင့်နှေးအဖြစ် 1.used လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို PVC, PE, PP, PS ကို ABS, PU အဖြစ်အိမ်ထောင်စုလျှပ်စစ်ကရိယာ၏ 2.the ပူးတွဲ ရာဘာ, ကြွေထည်, ကြွေထည်, အထည်နှင့်ဖိုက်ဘာထုတ်ကုန်များအတွက်, ဖြည့်စွက်အေးဂျင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့် retardabt အဖြစ်...
ရောင်းရန် 25kg ခနောက်စိမ်း trioxide sb2o3 ဓာတုထုတ်လုပ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များ: ငါ) ။ ကျနော်တို့အပေါများပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်။ II ကို) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတုစက်ရုံရှိသည်။ III ကို) ။ နမူနာတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ IV) ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေး, Excellent ကအရည်အသွေး & အာရုံကိုဝန်ဆောင်မှု V ကို) ။ prompt ပြန်ကြားချက်: ငါတို့သည် 24...
High Quality Sb2O3 Powder စျေး
Diantimony trioxide / Antimony (III ကို) အောက်ဆိုဒ် CAS: 1309-64-4 အဓိကအားဖြင့်မီးလျှံနှောင့်နှေးရာမှသူတို့၏အပူပြိုကွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဒြပ်ပေါင်းများင်တစ်ဦးမီးလျှံနှောင့်နှေးများ၏ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဟေလိုဂျင်အဖြစ်အသုံးပြုသောအစောဆုံးအော်ဂဲနစ်မီးလျှံနှောင့်နှေးတဦးဖြစ်ပြီး, ၏အစိတ်အပိုင်းကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်...
Sb2o3 99 Sb2O3 99 5% -99 Sb2o3 Nanopowder Msds 8% Sb2O3 စျေး Antimony trioxide ၏ Sb2o3 Buy Sb2O3 စျေး Per Gram Sb2o3 Nanopowder Applications ကို
Sb2o3 Nanopowder Msds
8% Sb2O3 စျေး
Antimony trioxide ၏ Sb2o3 Buy
Sb2O3 စျေး Per Gram
Sb2o3 Nanopowder Applications ကို